Fil d'actualités du 22/11/2017
22/11/2017 - 17:00 : TARANJA TSIPY KANETIBE: Fanatanjahantena Voasazy tsy mahazo mandray anjara amin’ny dingana manaraka eo amin’ny « Mini masters », taranja tsipy kanetibe intsony Pitr noho izy nikasi-tanana mpijery teny amin’ny Boulodrome-n’ny Paddock Mahamasina. Marihina fa hifarana ny 29 desambra izao ity fifaninanana ity.
22/11/2017 - 16:00 : ZAVA-KANTO SY LOTERATIORA: Lohahevitra miisa enina no holalininina mandritry ny kaoferansa momba ny teny 2017 hotanterahina eny Haitsiron’Iarivo eny Alarobia ny sabotsy 25 novambra izao, ka isan’izany ny Malagasy tsy tompon’ny teniny sy ny tenany manoloana ny asa fanoratana, hataon’I aja, teknika sy torohevitra amin’ny fomba fanoratana tononkira,…
22/11/2017 - 15:30 : MARC RAVALOMANANA: Nihaona tamin’ny filoha Ravalomanana Marc teto Faravohitra io tolakandro io ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Vondrona Afrikana, Andriamatoa Ramtane Lamamra niaraka tamin’ny Ramatoa Hawa Ahmed Youssouf solontena maharitry ny Vondrona Afrikana eto Madagasikara. Naharitra ora roa ny fihaonana, ka isan'ny noresahina ny momba ny fifidianana amin’ny taona ho avy.
22/11/2017 - 15:00 : IRAISAM-PIRENENA: Voaheloka higadra mandra-pahafatiny ilay mpitari-tafika ny foko Serbe tany Bosnie, dia ny Jeneraly Ratko Mladic nohenjehina noho ny fandripahana olona faobe tany Yogoslavie taloha, araka ny fitsarana natao tany Lahye tamin'ny alalan'ny TPIY (Tribonaly Iraisam-pirenena mikasika ny raharaha tany Yogoslavie)
22/11/2017 - 14:30 : BEKODOKA BESALAMPY: Sarety sy omby nilatsaka tany anaty hatsana 60 metatra latsaka kely, ka maty tsy tra-drano ny olona iray sy ny omby iray. Vehivavy iray kosa tapaka tongotra aman-tanana, ary naratra ihany koa ny omby iray. Tsy naninona kosa ny zazakely iray.
22/11/2017 - 14:00 : ZAZA KAMBAN-TELO MATY RENY: Noraisin’ny Minisiteran’ny mponina an-tanana ireo zaza kamban-telo vao teraka tany namakia, distrikan'i Mitsinjo. Naniraka avy hatrany ny ekipan’ny talem-paritra (Direction Régionale) ao Boeny hanao ny fanadihadiana.
22/11/2017 - 13:45 : ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY TANAN-DEHIBE: Hankalazaina ny 24 novambra ho avy izao eny amin’ny Tanana Voara Andohatapenaka ny JMJ na “Journée Mondiales des Villes” andiany voalohany, izay eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana.
22/11/2017 - 13:15 : ANDRIAMENA TSARATANANA: Olona 1 maty voatifitry ny dahalo androany maraina tokony ho tamin'ny 5 ora. Trano 4 nodaran'izy ireo, ary lasa ihany koa ny omby 80. Zaza iray natao takalon'aina, ary olona roa naratra voatifitra.
22/11/2017 - 13:00 : RN6 -FAHATAPAHANA: Misy fahatapahana ny lalàna mihazo an'Ambilobe PK15 mampitohy an'Ambilobe sy Diego noho ny fahatapahan'ny tetezana any an-toerana. Ny Orinasa Eiffage no manamboatra azy io amin'izao fotoana izao.
22/11/2017 - 12:45 : MANANJARY: Mitaky ny hanalana ao anatin'ny faritra Vatovavy Vitovinany, ka hanaovana an'i Mananjary ho faritra manokana sy mahaleo tena ireo terak'i Mananjary amin'ny alalan'ny Fikambanana MARAMI.
Archive du 20170202
Rajaonarimampianina Mametra-pialana raha hendry
Mbola ho ela vao higadona ny taona 2018, hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena vaovao, hahafahan�ny vahoaka mametraka izay olona heverina ho mahavita azy.
Fametrahana fitoniana Tsy terena amin�ny basy, hoy i Pety Rakotoniaina
Endrika iray ahitana fa tsy atokisan�ny vahoaka intsony ny fanjakana ny fisian�ny fitsaram-bahoaka, hoy i Pety Rakotoniaina, filohan�ny Antoko Tambatra, omaly.
Radavidson Andriamparany Benjamin Tokony hovaina ny tontolon�ny fanaovana politika Malagasy
Efa ny rehetra mihitsy no miaiky ankehitriny fa tokony hovaina ny faomba fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy nahomby ny natao hatrizay, hoy Atoa Radavidson Andriamparany Benjamin filohan�ny antoko FFF.
Saino ihany ny fitsaram-bahoaka e !
O ry Jean a ! Manahy ny aminao io aho fa tena minia midingin-drambo ianao na dia efa notenenina aza.
Kortezina manampahefana mitrifana Manomboka tezitra ny olona
Mahatezitra ny mpiara-belona ny fihetsiky ny ankamaroan�ireo mpitondra ambony eto amintsika eny an-dalambe eny.
Fiakaran�ny saran-dalana Nikoropaka ny fanjakana, homena vola ny mpitatitra
Nanapa-kevitra ny filankevitry ny governemanta manokana notanterahana omaly maraina teny Mahazoarivo fa hahazo ilay vola fanampiana ny mpitatitra miisa 6 305 ao anatina kaoperativa 156 manerana an�i Madagasikara.
Dahalo nahafaty olona Mirehareha fa tsara mpiaro
Olona iray namoy ny ainy, omby miisa 48 very. Izay no vokatry ny asan-dahalo nitranga tany Betsipolitra, distrikan�i Miandrivazo ny faramparan�ny taona 2016 iny.
Fanalefahana ny fiakaran'ny vidim-bary 8.000 T no haparitaka eny an-tsena
Tsy mametraka vidim-bary mazava intsony ny ankamaroan�ireo mpivarotra eny an-tsena amin�izao fotoana izao, indrindra fa ireo mpaninjara.
AJEEM Hanampy ireo afa-panadinana Bakalorea
Notanterahina nanomboka omaly alarobia 1febroary etsy amin�ny Tahala Rarihasina Analakely indray ary hifarana anio ilay Salon de l�orientation et guides des �tudes sup�rieures andiany faha-11 karakarain�ny AJEEM (Association des Jeunes Enseignants et Etudiants de Madagascar).
Mpivarotra amoron-dalana eny Behoririka Hafindra eo amin�ny � �ponge �
Nidina namaha ny olan�ireo mpivarotra amoron-dalana tetsy Behoririka omaly ny teknisianin�ny kaominina Antananarivo Renivohitra notarihin�ny Sekretera jeneraly Razafimahefa Heriniaina sy ny delegen�ny Boriborintany fahatelo.
Iza no hampandroso ?
Miha mitombo hatrany ny hantsana manasaraka ny mpitondra sy ny entina eto amin�ny firenena ankehitriny.